Otu esi enweta menu zoro ezo nke Motorola terminals | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | Motorola, Nkuzi
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụpụta ekwentị mkpanaaka na-etinye ohere zoro ezo na menu maka ndị mmepe ụlọ ọrụ site na nke ha nwere ike ịme nyocha nyocha dị iche iche nke akụrụngwa ngwaike ha niile. Dịka ọmụmaatụ, nke a bụ ikpe Samsung ma ọ bụ ọnụ LG, ụfọdụ ọnụ nke anyị na-ejikarị enweta na menu sistemụ zoro ezo site na koodu nke anyị kwesịrị ịkpọ site na dialer nke ngwaọrụ anyị.
N'ihe banyere ụgbọ ala Motorola, enwekwara menu zoro ezo nke anyị ga-esi nweta nhazi zuru oke nke nhazi ahụ Qualcomm Snapdragon na ike. Nchịkọta zoro ezo nke ga-enyere anyị aka, n'etiti ihe ndị ọzọ, guzobe njedebe data, gbaa ọchịchịrị ihuenyo nke ọnụ anyị ma ọ bụ ọbụna họrọ ihe nchọgharị faịlụ ndabara maka sistemụ arụmọrụ. Ọzọ anyị ga-egosi gị ntakịrị aghụghọ iji nweta nke a n'ụzọ dị mfe Zoro ezo menu na nsoro nke Motorola ọnụ dị ka Moto E, Moto G ma ọ bụ Moto X.
Nke mbu, gwa gi nke a zoro ezo menu nke Motorola ọnụ Ọ na-emetụta arụmọrụ nke sistemụ arụmọrụ yana ọnụ n'onwe ya. Site na nke a, m na-ekwu na ọ bụrụ na enwere ihe ị na-aghọtaghị ma ọ bụ na ị maghị nke ọma ihe ọ bụ maka, ị ka mma ghara imetụ ya aka ma hapụ ya ụkpụrụ ndabere ya ebe ọ bụ nhazi kachasị maka ịrụ ọrụ nke ọma nke ngwaọrụ ahụ.
Otu esi enweta menu zoro ezo nke Motorola terminals
para nweta menu ezoro ezo nke Motorola terminals dị ka Moto E, Moto G ma ọ bụ Moto X, anyị ga-wụnye a obubata dị ka Nova Launcher site na nke anyi ga enweta uzo esi enweta sistemu. Ozugbo arụnyere Nova Launcher, naanị anyị ga-agbaso ntuziaka ndị a iji mepụta ụzọ mkpirisi na ihuenyo ụlọ anyị nke ga-akpọrọ anyị otu click na menu zoro ezo nke ọdụ Motorola ndị a kpọtụrụ aha n'elu.
Anyị na-anọgide na ịpị akụkụ ọ bụla nke desktọọpụ kachasị, dị ka a ga - asị na anyị ga - agbakwunye Wijetị desktọọpụ ọhụrụ.
Na mmapụta menu anyị họrọ tinye ọhụrụ Ọkpụkpụ, M na-ekwu a ụzọ mkpirisi.
Na ihuenyo ọhụrụ gosipụtara, anyị ga-ahọrọ nhọrọ ahụ Ihe.
Ugbu a, anyị ga-agagharị na ndepụta nke mmemme ndị egosiri anyị ruo mgbe anyị chọtara nhọrọ ahụ Com.qualcomm.qualcommsettings.
Pịa na Com.qualcomm.qualcommsettings na anyị ga-enwerịrị ụzọ kpọmkwem na desktọọpụ anyị nke ga-akpọga anyị na menu ọhụrụ a zoro ezo site na nke anyị nwere ike ijikwa nhọrọ nhazi nke nhazi Qualcomm Snapdragon nke agbakwunyere na njedebe Motorola.
Ugbu a, naanị ihe anyị ga-eme bụ ịpị ụzọ mkpirisi ọhụrụ emere na desktọọpụ anyị nweta zoro ezo menu nke Motorola ọnụ. Nzuzo zoro ezo dị ka nke ị pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo dị n'elu ahịrị ndị a, nke anyị na-adụ gị ọdụ ka ị jiri nlezianya kpoo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Etu ị ga-esi nweta menu zoro ezo nke Motorola Moto E, Moto G na Moto X
Na Lollipop 5.0.1 Enweghị m ike ịchọta ọrụ ahụ. O nwere ike ịbụ na ha wepụtara ya?
hello, na 5.0.2 ọrụ ị na-ekwu banyere ya apụtaghị.
Ọ pụtaghị na Lollipop n'ihi na ọ bụ maka ndị ọrụ KitKat. Motorola enweburu nkwarụ ya na Lollipop.
site n'ebe ahu i nwere ike igbanwe imei na ntọala obula? IME IMEI mebiri ma anwaala m uzo di iche ma enweghi m ike idozi ya
A kagbuola ntinye ahụ kemgbe 2.017
Moto xt1542 na-eburu SnapDragon processor agaghị ekwe omume ịbanye na usoro ahụ
Daniel, ị jisiri ike banye, ọ bụrụ otú ahụ, ị ​​nwere ike ịgwa m otu i si mee ya biko… .na-ejikwa njikwa na oge
Nke a anaghị arụ ọrụ n'ihi na Qualcomm.com ọnọdụ Qualcomm adịghị, ọ bụrụ na ọ dị na moto g5 gbakwunyere, ewepụrụ ya obere oge m kwupụtara ya na weebụ.